Weelalka aluminium ee aluminium miyaa lagu kululeyn karaa microwave-ka? | Jiahua
Haa, dhib malahan.
Hubso in weelku furan yahay,
ka hortag ballaarinta kuleylka iyo qandaraaska qabow wuxuu sababa qarax, ha u isticmaalin waxyaabo caadi ah maacuunta ku jirta foornada microwave, waxaa fiican inaad isticmaasho xirmada diirimaadka kuleylka.
1, iska ilaali inaad laxiriirto filimka balaastigga ah cuntada: marka aad isticmaaleyso filim cusub, habka kululaynta, waxaa ugu wanaagsan inaadan toos ula xiriirin cuntada, cuntada waxaa lagu ridi karaa salka weel weyn, iyadoo balaastigga afkiisa laga duubay maddiibadda ama aan lahayn filim caag ah oo si toos ah loogu daboolay muraayad ama dhoobada, si uumiga biyuhu u xirnaado, si kululaynta dhaqso iyo si siman loo sii qabadsiiyo. Kahor intaadan cuntada ka saarin, dalool caagga si aad uga ilaaliso inuu cuntada ku dheganaado.
2, iska ilaali isticmaalka weelka xiran: kululaynta dareeraha waa in loo adeegsadaa weel afka ballaaran, maxaa yeelay kuleylka ka dhasha kuleylka cuntada ee weelka xiran ma fududa in la diro, sidaa darteed cadaadiska weelka ku jira aad buu u sareeyaa, waa sahlan yahay Xitaa marka lagu shiilayo cuntada duqeynta, sidoo kale waxaad rabtaa inaad u isticmaasho irbad ama garoocad horay usii Afuura filimka qolofta, si aan u sababin ka dib markii uu kululaado, garaac darbiga foornada wasakhda ah.
3, iska ilaali adeegsiga maraakiibta birta ah: maxaa yeelay waxaa lagu ridayaa foornada birta, aluminium, birta birta ka sameysan, dhaldhalaalka iyo maraakiibta kale ee birta, foornada microwave ee kuleylka waxay soo saari doontaa dhimbilo koronto waxayna ka tarjumaysaa microwave, labaduba waxay waxyeeleeyaan jirka foornada mana kariyaan cuntada.
4, ka fogow weelka caagga ah ee kuleyliyaha foornada microwave: mid waa cunnooyinka kulul waxay weelka ka dhigaysaa mid xumaada, tan kalena caag caam ah ayaa sii deyn doona walxaha sunta ah, wasakheynta cuntada, caafimaadka caafimaadka aadanaha.